ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မေးခွန်းငါးခုအွန်လိုင်း Daters ကြားနာစစ်ဆေးမှုငြီးငွေ့များမှာ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 24 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ပိုထက်တဲ့တတိယအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစတင်ရန်အဘယ်မှာရှိလောကရှိ, တဦးတည်းအင်တာနက်ကိုကျော်ချိန်းတွေ့ဆုပ်ကိုင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲ concept ကိုမဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်မယ်.
သို့သော်, တချို့လူတွေနေဆဲဒေသခံ bar မှာမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းနှင့်မဆက်ဆံရေးစတင်အားဖြင့်မှိုင်နေကြတယ်သို့မဟုတ်အဆင်မပြေမိတ်ဆွေ-of-a-မိတ်ဆွေကို set up.
ဒီအယူအဆအဟောင်းကစပ်စုကို, သောသူတို့အမေးခွန်းများမေးကို. ဤအရပ်၌သာအနည်းငယ်ငါတို့သည်မျက်စိကန်းရက်စွဲများနှင့်တစ်ခုတည်းရဲ့ကျောက်ပြားကိုနှင့်အတူအနားယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ.
လူတစ်ဦးတစ်ဦးလူသတ်ဖြစ်အံ့သောငှါထွက်လာအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုလျှင်အဘယ်သို့? ထိုအခါ, ကကိုစို့လို. သို့သော်, သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားတစ်ဦးလူသတ်ဖြစ်အံ့သောငှါထွက်လာလှည့်လျှင်အဘယ်သို့သော? တစ်ခုသို့မဟုတ် weirdo? သို့မဟုတ်ထူးခြားဆန်းပြားအသီးကိုသီးနှင့်အတူအချို့သော fetish ရှိပါတယ်? အဲဒီချိန်းတွေ့သည်အဘယ်သို့င်: အခြားလူတစ်ဦးကိုမျှော်လင့်ထားကြောင်းတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး.
သင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောဖြစ်ရှာမတွေ့ပါနဲ့? တကယ်တော့, ဒီအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏အကြီးမားဆုံးအထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးကီးဘုတ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်တဲ့အခါ, သူတို့တစ်တွေအများကြီးလျော့နည်းဖိအားများခံစားရ, သောသူတို့အကယ့်ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့၏ပြီးပြည့်စုံသောဆန့်ကျင်ဘက်င်နှင့်အချိန်အားဖြင့်သင်တို့မျက်နှာ-To-မျက်နှာခရီးဦးကြိုပြုခြင်း, ရှိသမျှတို့သည်အသေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်ငှက်တို့သည်အဘို့ဖြစ်၏! ကျနော်တို့တကယ်အရေးမကြီးပါဘူးသောဘာသာရပ်များမှဆင်းရရန်သူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိသည်များနှင့်အဆင်မပြေသော banter မနက်စာအငတ်ခံပြီး.
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ဓါတ်ပုံတွေကိုတူမကြည့်ကြပါလျှင်အဘယ်သို့? ပထမဦးဆုံး, သူတို့သည်ငါ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသောအခါငါသည်စုံလင်သောအလင်းရောင်အတွက်နားကိုမှနားဖိုင်တွေကိုမည်မဟုတ်ကြောင်းကတိပေးနိုင်တယ်, ငါ့ဓာတ်ပုံကျွန်မတူကိုကြည့်အကြံပြုသောအရာကိုအရာဖြစ်ပါသည်. အဲဒီဓါတ်ပုံအတွက်အတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာင်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ပုံတွင်အနိုင်နိုင်တူညီသူတစ်ဦးဖြစ်အံ့သောငှါထွက်လာဖွင့်မယ်ဆိုရင်, ကျနော်သာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါငါ့ကိုဆွဲငင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်လိုက်ဖက်မျှော်လင့်နိုင်. ကျနော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်လူတစ်ဦးသူတို့နေသော ပတ်သက်. လိမ်လည်ပြီဆိုရင်, သို့သော်, အနီရောင်အလံများနေရာတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
သင်မဆင်မခြင် Are? မပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအပူတပြင်းမေတ္တာကိုရှာနေတခြားသူတွေထက်. လူပျိုလူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ဆိုးများမှာ, မျှော်လင့်, စိတ်မရှည်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်လိုက်ရှာ, ကျွန်တော်တို့ကမရှိပါတယ်? အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်: ကတော့ဘူးထွက်ရှိလူတွေ့ဆုံရန်အဖြစ်လွယ်ကူမယ်. ဒါဟာကုန်တိုက်ကိုသွားဖို့စအဖြစ်လွယ်ကူမယ်, ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်ကိုမဝယ်အဘယ်ကြောင့်ဒါပေမယ့်င်!
အဘယ်ကြောင့်မသွားဘူး သင်ကငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်အားဖြင့်သင်တို့ကို set up ကြကုန်အံ့? မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ရက်စွဲများကျယ်ပြန့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအဖြစ်လူသိများကြလို့ပါပဲ. ကိုယ့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြောင့်, ငါတို့နှင့်ဘေးအန္တရာယ်၏အမှု၌စိတ်ပျက်ဖို့တတိယပါတီအရာအားလုံးပိုမိုဆိုးရွားစေသည်ရှိခြင်းလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ.
သင်မည်သို့ယ့်အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကသိမှရနိုင်? ငါသည်ငါ၏မိတ်ဆွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးလိင်အားလုံးနှင့်စီးတီးခုမြောက်သိတူညီသောလမ်း, ငါ့အဒေါ်ရဲ့ mammogram ရလဒ်များနှင့်ငါ့အဟောင်းပါမောက္ခ၏သဘာဝမွေးဖွားခြင်းအစီအစဉ်ကို. ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်, ကျွန်တော်အင်တာနက်ကိုကျော်အရာအားလုံးကိုဝေမျှ. ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့, ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်း rekindle, ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသောအနောက်ဆုံး uninteresting အသေးစိတ်တို့အကြား; ကသာညာဘက်ငါတို့သည်လည်းမရှိမေတ္တာကိုရှာတွေ့မယ်.
ဒါကြောင့်စျေးကြီးသည်မဟုတ်? သင်မှန်တယ်ပြုမပြုလျှင်. web ကိုဝိုင်းတစ်ဦးသန်းကွဲပြားခြားနားသောပရိုဖိုင်းရှိသည်ရန်မအစစ်အမှန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သင့်အဘို့အအလုပ်ဖြစ်သည့် site ကိုရှာတွေ့, sign up ကိုထိုသူတို့အားပေးဆောင်. ငါကအားလုံးသင်သည်ထွက်ဝယ်အသစ်အအဝတ်ကိုထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ခြင်းကိုတက်အဆုံးသတ်မည်ကတိပေး, သို့မဟုတ်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပူဇော်ရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါခဲ့အချိုရည်, စတာတွေ.
မလုပ်ပါနှင့် သင်ကလူသာမန်လမ်းခရီးဦးကြိုပြုခြင်းချင်တယ်? အကြွင်းမဲ့. စောင့်. ဒါဟာင် 2014? ဒါဟာပုံမှန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်!
လူတစ်ဦးရှိလူများနှင့်တွေ့ဆုံမီနူးကိုချွတ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ကျနော်တို့ရက်စွဲဖို့ရွေးချယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းငါတို့သည်ဤလောက၏ကြွင်း blinders ဝတ်ဆင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး.
ငါတို့ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်ကွာသွား click နှိပ်ပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ် block ဖြစ်ပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျနော်တို့၏မေတ္တာ၌ madly ကျရောက်စေလို. အဲဒီအကြောင်းမရှိပါမေးခွန်း.